Booliska caalamiga ee INTERPOL oo la weydiistay soo qabashada Cabdirashiid Janan - Worldnews.com
Janan oo markii hore "doon
"Wasiirka Amniga dowlad goboleedka ee Soomaaliya loogu xiray 'dambiyo aad u culus' 31-kii August, 2019, kaasoo dhawaan ka baxsaday xabsigii lagu hayay, kuna sugan Kenya, waa in la celiyo si uu caddaaladda u wajaho"
Tan iyo markii ay dowladda Soomaaliya 28-kii bishii January shaacisay in uu Cabdirashiid Janan ka baxsaday xabsi ah ku hayeen, waxaa isasoo tareysay hadal-heynta ku saabsan...
Coronavirus: Kumuu ahaa Nuur Cadde Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya?
Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) ayaa London ugu geeriyooday xanuunka Coronavirus, sida ay qoyskiisa xaeiijiyeen. Bishii hore ee March...
Waxa sii kordhaysa tirada dadka shacabka ah ee ku waxyeellooba weerarrada xaga cirka ah ee sida qarsoodiga ah milatariga Maraykanku uga qayb galo dagaalka Soomaaliya, iyada...
Amnesty: Mareykanka shacab ayey ku dileen Soomaaliya
Duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa bishii Febraayo dilay laba qof oo shacab ah islamarkaana dhaawacay saddex kale, waxaa sidaas bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay hay’adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. ......
Kadib eedeyntii Amnesty, maxaa la gudboon dowladda Somalia?
Hay’adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya ay bishii Febraayo dileen laba qof oo shacab ah islamarkaana dhaawaceen saddex kale. ......
Coronavirus: Farmaajo oo cafis u fidiyey in ka badan 100 maxbuus
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xoojinaya dadaallada ku aaddan ka hortagga cudurka Koroona ayaa Cafis Madaxweyne u fidiyey 148 maxbuus oo u xukunnaa dambiyo fudud. Madaxweynaha ayaa soo saaray xeerka cafinta xukumaneyaashan kaddib warbixin ku saabsan xaaladda maxaabiista dalka oo uu u soo gudbiyey...
Civilian casualties continue to mount from the US military’s secret air war in Somalia, with no justice or reparation for the victims of possible violations of international humanitarian law, Amnesty International warned as it released details of two more deadly airstrikes so far this year. US Africa Command (AFRICOM) has conducted hundreds of airstrikes in the decade-long...
Jubbaland : Amniga doorashada waxaa illaalinaya AMISOM iyo ciidanka Jubbaland
Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo shir jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in waxyaabihii ay ku heshiiyeen waftigii midoowga Afrika ee shalay Kismaayo tagay ay ka mid ahaayeen arrimo la xiriira amniga doorashada. "Amniga doorashada waxaa illaalin doona ciidanka booliiska AMISOM iyo Booliiska Jubbaland" ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan. Waxa uu dhanka kale...